Haweeyney 28sano xabsi lagu xukumay kadib markii ay ilmo 5 jir ah nolosha ku silcisay (warbixin xaasaasi ah). (Sawiro). – Filimside.net
Haweeyney 28sano xabsi lagu xukumay kadib markii ay ilmo 5 jir ah nolosha ku silcisay (warbixin xaasaasi ah). (Sawiro).
January 4, 2019 Cabdiraxmaan Anteeno
Tammi Bleimeyer ayaa lagu xukumay 28 sano oo xabsi ah kaddib markii Jordan Bleimeyer oo ah Wiil uu dhalay ninkeeda oo lanoolaa iyada iyo ilmaheeda ey Si xun u xabbistay una ciqaabtay.
Hooyadan ayaa ku qasabtay Jordan oo 5 sano jir ah inuu xirto xafaayad kaddibna lagu xiro meel ey ku magacaabeen (Harry Potter Room), oo ah qol si hoose loo qoday oo aad ciriir u ah kuna yaalla jaranjarada hoosteeda halkaas oo lagu shubo qashinka, biraha, ciddiyaha iyo cirbadaha la iska tuuro.
Jordan waxaa maalin walba lasiin jiray rooti qallalan oo markii loo taago hadduu horay kadafi waayo lagala laaban jiray, halka ilmaha la aabbaha ahna ey si wada jir ah wax ugu wada cuni jireen hal Miis.
Jordan waxaa intaas udheeraa jirdil aad uxun oo ey u geysan jirtay Hooyo Tammi oo ah Eeddadii aabbihiis qabay.
Allison ayaa sheegtay in iyada iyo walalkeed Cody ey Jordan uqarin jireen Rootiga marka hooyadood ey maqantahay.
Horraan ayaa Aabbihiis Bradley Bleimeyer loogu xukumay 15 sano oo xabsi ah isla Falkaan oo kale 2016-kii.
Dhakhaatiirta ayaa sheegay in Jordan uu aad u il darnaa miizaankiisana ey ku sheegeen inuu ahaa 29 Pound oo udhiganta 13kg.
Cody oo ah 16 jir ayaa sheegay in mar ey maqneyd hooyadood ey kasoo bixiyeen meeshi uu kujiray jordan isaga iyo walaashiis Allison oo 14 jir ah, kaddibna uu ugaliyay gacanta walaashiis Allison una sheegay in ey sii heyso Inta uu Police-ka uga yeeraayo.
Allison ayaa iyadana sheegtay in markii ey heysay Jordan eysan dareemeynin in qof beni aadam ah ey heyso fudeedkiisa owgiis.
Jordan ayaa lageeyay isbitaal si loo dabiibo waxaana dhakhaatiirta ey sheegeen in maalmo gudahood uu ku dhiman lahaa haddaan laga gaareen.
Police-ka Magalaada Texas ayaa soo bad baadiyay Jordan gacantana kusoo dhigay Tammi.
Dacwad dheer kadib iyo marag fur ey ku sameeyeen Qaar kamid ah caruurteeda Cody iyo Allison ayaa sababtay in Hooyadood Tammi lagu xukumo 28 sano oo xabsi. Tammi ayaa Baroor iyo oohin isku dartay markuu xukunka dhacay sidoo kale cody ayaa la arkaayay isagoo ilmeynaya dacwana ku ooggaya hooyadii Tammi.
Jordan waxa uu la midoobi doonaa Hooyadiis Wendy Hall marka isbitaalka laga saarro, sidoo kale ilmaha la aabbaha ahaa ayaa waxaa lawareegay (CPS) oo laga soo gaabiyay Child Protective Service oo ah meesha ilmaha lagu xanaaneeyo si iyagana halkaas loogu daryeello.